Mpanamboatra kamiao «pallet» | China Pallet Truck Factory
Hety avo lenta kamio paleta, Ity vokatra ity dia ampiasaina indrindra amin'ny asa fitehirizana entana, toby fampiasa lozisialy, ary mety koa amin'ny fikorianan'ny fizotran'ny atrikasa, ary azo ampiasaina ho sehatry ny asa ihany koa. Raha latsaky ny 300 mm ny haavon'ny fiakarana, dia mitovy amin'ny fampiasana kamio io.PLC mifehy ny lozam-pifamoivoizana scissor pallet mandeha ho azy, ity vokatra ity dia fitaovana tsy maintsy ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanontana, miaraka amin'ny fiasan'ny fahatsapana ho azy ny fiakarana na lavo.
DAXLIFTER Brand Mini Electric Power Pallet Truck dia vokatra vaovao izayhalalinina sy novolavolaina. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php/
China Manual Power Hand Trolley Lift Pallet Truck dia fitaovana fitehirizana ara-toekarena ao amin'ny indostria fikirakirana fitaovana sy akanjo ho an'ny trano fitehirizana entana sasany dia tsy manana toerana elektrika ampy hampiasaina. Mazava ho azy fa misy maodely fanavaozana izay herin'ny bateria hifehezana ny fampiakarana sy midina,
Electric Pallet Truck High Level Daxlifter no fitaovana fikirakirana fitaovana manokana ho an'ny fitehirizana sy ny hetsiky ny trano fanatobiana entana.
Mampiasà herinaratra bateria, tsy mila tariby. Kamio paompisety scissor manual, ity dia fitaovan'ny vokatra ara-toekarena ho an'ny trano fitehirizana maivana. Mampiasa famolavolana asa mavesatra ity fitaovana ity, ary ny kodiarana dia misy fefy miaro azy mba tsy hanorotoro ny atiny. Ary izy io dia mandray ny endrika famolavolana anti-pinch sy ny fiarovana fiarovana be loatra, izay azo itokisana sy azo antoka kokoa. Mankato ny fenitra fiarovana Eoropeana EN 1757-2 sy amerikana ANSI / ASME. Mandritra izany fotoana izany dia manolotra serivisy manokana izahay hanolo ny fiasan'ny tanana amin'ny fandidiana bateria elektrika.